Somaliland oo diyaarsaneysa qorshaha ay la tegeysa shirka soo socda ee Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Guddida Somaliland u qaabilsan Wada-hadalada dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaaladda Hargeysa, iyagoo uga wada hadlay waxa maamulka Somaliland uu la tegayo shirka soo socda ee dabayaaqada bishaan ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Kulankan oo Albaabadu u xirnaayeen ayaa markii uu dhamaaday waxaa saxaafadda la hadlay Wasiirka arrimaha debadda Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, kaasoo ka warbixiyey wixii guddigu ka wada hadlay.
“Waxaanu ka wada tashanaynaa Ajandaha iyo qorshaha shirka aanu la tagayno, Wada hadaladii hore waxyaabaha ka soo baxay wixii ka fulay iyo wixii aan ka fulin. Waxaanu doonaynaa inaanu Turkiga tagno annaga oo ka boganay arrimaha aanu doonayno inaanu ka hadalno iyo ajandahayaga. Waxaad la socotaan in waxyaabihii ugu mihiisnaa ee Shirkii Jabuuti ka soo baxay ay ka mid ahaayeen arrimaha Masiiriga ah iyo inaan la carqaladdayn wixii dhaqaalaha ah oo aan la siyaasadayn iyo in la fuliyo arrimaha kale ee ay ka mid yihiin Maamulka Hawada” ayuu yiri Wasiir Maxamed Biixi.
Wasiir Maxamed Biixi ayaa sheegay inay talooyin badan oo arrimaha wadahadalka ku saabsan ka heleen Baarlamaanka Yurub oo ay dhawaan booqdeen, dad aqoon yahan ah iyo waliba wasiiro beesha caalamka ah kuwaasi oo wax ka taraya qorshahooda, sida uu yiri.
Wasiirku waxa uu tilmaamay inay rajaynayaan in kulamaddan soo socda laga gaaro go’aamo wax ku ool ah ‘Waxaanu filaynaa inaanu kulankan natiijo wax ku ool ah ka gaarno, waayo ijiid aan ku jiidee waa gacmo daalis, waxaanay labadayadaba dantu ugu jirtaa inaanu kala ambabaxno annagoo laba dal oo jaara ah” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirku waxa uu sheegay in hanaankii hore ee wada hadalada loo raaci jiray wax laga bedelay islamarkaana ay ka filayaan natiijo miro dhal ah oo kulamada laga gaaro.
Shirka soo socda ee labada dhinac ayaa loo balansan yahay 26-27-ka Febaraayo ee bishaan, waxaana la qorsheeyey inuu ka dhaco magaalada Istanbul.
Taliyaaniga: Afar kun muhaajiriin ah oo muddo 5 maalmood ah la samatabixiyey